Mareykanka toogasho kadhacday, 26 qof ayaa geeriyooday – Radio Daljir
Mareykanka toogasho kadhacday, 26 qof ayaa geeriyooday
Noofember 6, 2017 6:23 b 0
Ku dhowaad 26- qof ayaa lagu dilay, labaatan kalena dhaawac ayaa soo gaaray toogasho ka dhacday gudaha kansiid ku taala gobolka Texas ee Mareykanka.
Nin hubaysan ayaa la sheegay falkaan toogashada ah inuu u gaystay dadkaasi, kadib rasaas uu ku furay dadka badan. booliska ayaa sheegaya in la helay maydka nin looga shakisanyahay inuu falkaasi gaystay, mana cadda in la toogtay iyo inuu isagu isdilay.
Madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho 12-cisho qaadanaysa ku jooga wadanka Jabaan iyo qaaradda Asia ayaa ku kutilmaamay weerarkaasi mid si’aad ah looga argagaxo, waxaana sidoo kale uu xusay inuu xaaladda uu lasocon doono.
Hay’adaha ammaanka ee Mareykanka ayaa wada baaritaano kusaabsan dhacdadaa Texas ee dadka badan lagu dilay, waxaana guddoomiyaha gobolka Texas Gregg Abbott uu ku tilmaamay inay tahay dhacadadii ugu xumayd ee soo marta gobolka.
Galmudug oo xukun ku riday kalluumaysato Yemen u dhashay
Wasiir baarlamaanka Soomaaliya hortagaya maanta